Medical Zvigadzirwa Vagadziri uye vanotengesa - China Medical Equipment Fekitori
Micro yeropa rekuunganidza chubhu inoshanda seyakareruka kuunganidza fomu yeropa chigunwe, nzeve kana chitsitsinho mumaonate uye kuvarwere vevana. IVEN micro yeropa rekuunganidza chubhu muchina unojekesa mashandiro nekutendera otomatiki kugadzirisa kweiyo chubhu kurodha, dosing, kubaya uye kurongedza. Iyo inovandudza kufambiswa kwebasa nechete-chidimbu chidiki cheropa rekuunganidza chubhu yekugadzira tambo uye inoda vashoma vashandi vashande.
Yedu Sirinji Kuungana Muchina unoshandiswa kuunganidza sirinji otomatiki. Inogona kuburitsa mhando dzese dzemajekiseni, anosanganisira luer slip mhando, yerudzi rwekuvhara mhando, nezvimwe.
Yedu Sirinji Kuungana Machine inotora LCD kuratidza kuratidza kumhanya kwekumwisa, uye inogona kugadzirisa kumhanya kwegungano zvakasiyana, ine kuverenga kwemagetsi. Kubudirira kwepamusoro, kushomeka kwesimba, kugadziriswa kuri nyore, kushanda kwakadzikama, ruzha rwakaderera, inokodzera musangano weGMP.
Iyo yeropa yekuunganidza tsono gungano muchina unoshandisa yepeni mhando yeropa kuunganidza tsono chigadzirwa chigadzirwa. Iyo izere otomatiki. Easy & yakachengeteka mashandiro neayo ega PLC & HMI kutonga, zvinongoda vashandi ve3-4 vanogona kumhanyisa mutsetse wese zvakanaka. Inofananidzwa nevamwe vagadziri, yedu yeropa kuunganidza tsono gungano muchina ine idiki yakaenzana dhayimendi, yakagadzikana uye inonzwisisika kumhanya, yakaderera mhosva rate uye yekugadzirisa mutengo, uye nezvimwe.
Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer,